Upapasho olutsha lwe-BIM: BIM ngolwimi olucacileyo-iGeofumadas
Umbhalo omtsha we-BIM: BIM ngolwimi olulula
NgoDisemba, 2017 Ezahlukeneyo
IZiko leendaba laseBentley, elipapasha uluhlu olubanzi lweencwadi zesikhokelo kunye nemisebenzi yokubonisana ngobungcali enikezelwe kwinkqubela phambili ye-BIM esetyenziswe kwiindawo ezahlukeneyo ezinje ngezokwakha, ubunjineli, ulwakhiwo, imisebenzi, ubume behlabathi kunye nemfundo, ibhengeze namhlanje ukubakho isihloko sakho esitsha, BIM ngolwimi olulula, ngoku ikhona njengomshicileli wokushicilela kunye ne-eBook ye-Kindle ne-iOS.
UVinayak Trivedi, umongameli we-Bentley Institute wathi, "Sivuyiswa kakhulu ukubonelela uluntu isihloko esikude esilindelwe iBentley Press Institute: BIM ngolwimi olulula Ngu-Iain Miskimmin, enye yeengcali zethu ezivela kwi-BIM Advancement Academy. Ngolu kongeza kwilayibrari yethu, iBentley Press Institute iyaqhubeka nomsebenzi wayo wokuqhubela phambili imisebenzi eyahlukeneyo ngokupapasha iziseko zophuhliso zehlabathi, ezifumaneka ngokushicilelwa kunye neefomathi zedijithali. Olu papasho lukhuthaza unxibelelwano phakathi kwamashishini, abaphandi kunye nabafundi, kwaye lusekwe kwiqela lamaBentley elingaphezulu kweminyaka engama-30 yamava kushishino lwezibonelelo. ”
Njengoko i-BIM iphucula amandla okulawula, ukuvelisa kunye nokusebenzisa ulwazi oluvela kwiiasethi zeziseko zophuhliso (uyilo, ulwakhiwo, imisebenzi kunye nolondolozo) kuwo wonke umjikelo wobomi babo, inani elandayo loorhulumente kwihlabathi liphela lifuna kwimigangatho yeBIM yeNqanaba 2 kunye nokunikezelwa kweeprojekthi eziza kuxhaswa ngurhulumente. Ukuphunyezwa ngempumelelo kwesicwangciso se-BIM kunokubangela ukonga iindleko, ukusebenza okuphuculweyo kunye neziphumo ezingcono kwiprojekthi. BIM ngolwimi olulula Kunenzuzo kubaqalayo kunye nalabo abanamava ngeendlela ze-BIM ukuqinisekisa ukuba bonke abaqeqeshi bazimisele ngokupheleleyo ukuba yingxenye yemizamo yezo shishino ejoliswe ekuqhubekeni kwe-BIM.
BIM ngolwimi olulula unciphisa iminyaka yamava kunye nezifundo ezifundwe kwiBentley Institute BIM Advance Academy. Isikhokelo umfundi ngenxa yobunzima ezininzi yokunikezela indlela BIM, ngokusebenzisa ulwimi olulula, ukuqonda iingqiqo kunye neebhloko zokwakha ezifunekayo ukuphumeza isicwangciso olusebenzayo. Ubonisa isizathu sokuba ukuqokelela iinkcukacha asethi kubalulekile kwinkqubo BIM, yaye kutheni ethembekileyo kwaye ulwazi oluthembekileyo, eyibeka ngendlela eqondakalayo consumable, kubalulekile ukuba olusebenzayo ekwenziweni kwezigqibo: uku, isixhasi, replacement, ukususwa okanye ushiye iimpahla njengoko zikhona.
BIM ngolwimi olulula Ikwavavanya izinto ezintathu ekudaleni iindlela ezilungileyo zeBIM: abantu, inkqubo, kunye netekhnoloji. Chaza ukuba indibaniselwano yezi zinto zidlala njani indima ebalulekileyo kumjikelo womsebenzi we-asethi nasekuhambiseni iziphumo ezingcono. Incwadi iphinda ivavanye 'iintsika ezisibhozo zobulumko be-BIM' eziqinisekisa ezona ndlela zibalaseleyo kunye nombono wehlabathi we-BIM.
Umbhali we-Iain Miskimmin uthi, "Ukucinga kwangoku kwishishini kwilizwe ledijithali kuhamba ngokukhawuleza nangokutshintsha. Kodwa izifundo esizifunde kwi-BIM Breakthrough Academy kwaye esiwabelana nawe kule ncwadi ziyinqobo kakhulu yokuqala kwanoma yimuphi umntu okanye intlangano enqwenela ukubamba zombini ukuqiqa kwezinga eliphezulu kunye neenkcukacha zeBIM. "
Njengazo zonke izihloko kwiqoqo le-Bentley Press Institute, BIM ngolwimi olulula ijolise ekunikezeleni ngokuqhubekayo okunceda abafundi kunye nabona banamava kwezobugcisa kwiziseko zokwandisa amava abo kunye nokuphucula ukusebenza kwabo ngaphakathi kokuhamba komsebenzi.
Umlinganiselo oxabisekileyo we-BIM isipiliyoni siyakhupha kule ncwadi encinci nefikelelekayo. BIM ngolwimi olulula sele sele ifumaneka njengencwadi epapashwe kuyo www.Bentley.com/books, kunye ne-Amazon eBook kunye iTunes.
Mayelana noMlobi kunye noMhleli
Umbhali I-Mispimmin Uchithe inxalenye engcono kwiminyaka emibini esebenza ekuncediseni izakhiwo kunye namashishini ekwakhi, ekuncedeni ukuhambisa iiprojekthi ze-BIM zokuqala e-UK. Ukususela 2012, uye owalungisa Academy of ulwazi Crossrail / Bentley phambili BIM Academy eLondon. Esi sikhundla uvumele ukuba basebenzisane kunye ngaphezu 4.000 icandelo abantu ehlabathini lonke ukuba sithimba zonke iingcamango zabo kunye namava kwiteknoloji BIM, kuquka ezinye iiprojekthi zezibonelelo sikhulu ehlabathini. Wasebenza ngokusondeleyo iqela BIM emsebenzini UK kwaye ikhokelela iiasethi dictionary izibonelelo data sesiqalo UK (IADD4UK).
Umhleli UBill Hoskins Ube ngumyili wezakhiwo ze-25 iminyaka. Ngeli xesha, waba ne-CAD (2D kunye ne-3D). Ukubandakanyeka kwamenza wakhula amava amaninzi kwishishini lekhompyutha. Ufunde ukufunda kwi-Visual Basic kunye ne-SQL kunye nokuphuhlisa ulwazi. Uncedise iLondon 2012 ukuseka ukufakwa kwedata egcinwe onke amaxwebhu okwakhiwa kweDolophu yaseOlimpiki ize ibhale iinkqubo ezisetyenziswe liqela eligcinwe kule ndawo. Ukongezelela, wayengumcebisi oye wakha ukufakwa kweenkcukacha ze-London Underground ukuqinisekisa ukuba ihambelana ngokupheleleyo ne-BS 1192-2007.
Malunga ne-Bentley Press Institute
Bentley Institute Cinezela eliyinkokheli ulwazi xa epapasha iincwadi zezifundo kunye nemisebenzi reference yobungcali ukwenzela ukuphucula izakhiwo, engineering kunye nolwakhiwo (AEC), imisebenzi, geospatial kunye noluntu zemfundo. A uphawu uluhlu lwalo lwezihloko kuquka iincwadi ugubungela MicroStation, uhlahlelo kunye noyilo izakhiwo, ukwakha, indlela nezityalo site yoyilo, ukuhlalutywa kwesakhiwo kunye noyilo, kunye nocazululo namanzi amdaka - zonke ezibhaliweyo ziingcali abakuzo u qeqesho. Ukufumana ulwazi oluninzi malunga neBentley Press Institute, tyelela www.Bentley.com/books.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Landa imephu kwaye uhlele indlela usebenzisa i-BBBike
Post Next Beka Imephu yeBing njengemephu yemvelaphi kwi-MicrostationOkulandelayo »